I-China Runjin © Krunt ™ -4000 Ukukhiqiza Umshini Wokwenza Izithelo Nokwakha | Runchen
Faka i-granule yezithelo eyomisiwe, i-sugar granule noma i-granule ewuketshezi ku-ayisikhilimu.
Imoto ishayela isikulufu esiningi ukudlulisa ama-granules. Ukungeza i-granule ku-ayisikhilimu kahle nangokuzinza ngepompo ye-vane, bese uxuba i-granule ne-ice cream slurry ngumxube owakhelwe ngaphakathi ngaphansi kwejubane eliqhubekayo .Ipompo yokudla ye-Vane iyalungiswa nge-potentiometer.
IzitheloTM-4000 iyisondli sesithelo se-granule futhi ingahlangabezana ngokuphelele nezidingo zenhlanzeko yokudla .Imishini yenziwe ngezingxenye ezisezingeni eliphakeme futhi ukwakheka kwayo kungahlangabezana nezinga eliqinile lenhlanzeko, ukuthembeka nokuqina. Zonke izingxenye ezizothinta u-ayisikhilimu granule zenziwe ngensimbi engagqwali engu-304 .Kukhona ama-casters afakwe onyaweni bemishini, okungaba lula ukuhambisa nokufaka.
Indebe yeHopper Nenani Elilinganisiwe
Ukuze kuqinisekiswe ukuthi isikulufu esilinganisiwe singaphakela i-granule ezinzile, idivayisi yokuxuba ifakwe ku-hopper .Isikulufa esikhulu sidlulisa ama-granules ekufakweni kwepompo ye-vane feeder. ijubane lesikulufu sokulinganisa lingashintshwa lisuke ku-0% liye ku-100%.
IVane Yokondla Iphampu
Iphampu yokuphakela i-Vane yakhiwe ngamasondo wokushayela wensimbi. Kungaba ukuxubana ama-granules ngokufana ne-ayisikhilimu slurry kusuka kumshini wokuqandisa oqhubekayo .Inqubekela phambili yokushintshaniswa kwe-vane ingavimba ukungena kwesithelo, okungahlukanisa u-ice cream slurry nomoya .Ukuqhutshwa kokujikeleza kwamasondo wedrayivu, lapho i-vane ifinyelela i-ice cream slurry, izobuyela ukushayela amasondo ngokuzenzakalela bese ibeka u-ice cream slurry phansi. Umthethonqubo ongenazinyathelo ungenziwa ngejubane lokugijima lamasondo okushayela nge-potentiometer
Isihlanganisi sise-vane pump pump. Ingakwazi ukuhlanganisa i-ice cream slurry nezithelo eziwumbhoshongo ngaphezulu ngejubane eliqhubekayo.
Ukusebenza Kokuxuba Izithelo
Iphaneli Yokusebenza Yonke inkinobho esebenzayo ikuphaneli langaphambili, futhi kulula ukuyisebenzisa.
Kungasetshenziswa ngqo ngemuva kokunikezwa kwamandla .Kulula kakhulu.
I-CIP ukuhlanza online
Inqubo yokuhlanza i-CIP ingaqala ngokulawula iphaneli yokusebenza, engalungisa isikhala phakathi kwepompo ye-feeder nengxenye yokuxubana njengebanga langempela.
Amandla Okwengeza Izithelo
Izithelo TM-4000 zingakhiqiza i-16 ~ 400L / Ihora iqoqo ngalinye ngokusebenzisa isikulufa esihlukile.
l ezinye izingxenye ezisele
izinto Ipharamitha Amazwi
I-Hopper Mixing Motor 0.75 KW
IVane Pump Motor 1.1 KW
Okuphakelayo tube, ngaphandle 51 mm 2 "hose ngocingo
Ukukhipha ishubhu, ngaphandle 51 mm 2 "hose ngocingo
Langaphambilini I-Runjin Jacketed Tank
Olandelayo: Umshini wokugcwalisa umshini weRunjin © Krunt ™ -Z12 Z12 Ice Cream Rotary